ဝက်ဘ်ဆိုဒ်ရေးဆွဲနည်း • VECTOR Online Learning Platform
အခုခေတ်မှာ တော်တော်များများဟာ Time Limit, Access Limit, Resource Limit, Support Limit နဲ့ရှိကြပေမယ့် VECTOR မှာတော့ Unlimited Learning Time, Unlimited Access, Unlimited Watch, Unlimited Resources နဲ့ Unlimited Support ဆိုတဲ့ အခွင့်အရေးတွေကို သင်တန်းသားတိုင်း ရရှိနိုင်ပါတယ်။ သင်ဟာ စွန့်ဦးတီထွင်တယောက်, စီးပွားရေး လုပ်ငန်းရှင်တယောက်, အလွတ်တန်း ပညာရှင်တယောက်, ကျောင်းသား တစ်ယောက် ဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင် အချိန်တိုအတွင်း အလွယ်တကူ နဲ့ “Website” တစ်ခုကို ဖန်တီးဖို့ (ဒါမှမဟုတ်) ရေးဆွဲဖို့ လိုအပ်ခဲ့မယ်ဆိုရင် VECTOR ရဲ့ Featured Course ဖြစ်တဲ့ “ဝက်ဘ်ဆိုဒ်ရေးဆွဲနည်း” သင်တန်းကို “၄ သောင်း ၉ ထောင်” ကျပ်တည်းဖြင့် “Unlimited” အခွင့်အရေးတွေကို ရယူလိုက်ပါနော်!
သင်တန်းကြေး = 49,000 Ks
– Web Design နှင့် Web Development လေ့လာနေသော ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူများ
– အွန်လိုင်းနယ်ပယ်တွင် ကျင်လည်နေသော Digital Marketer များ
– မိမိရဲ့ Portfolio ကိုလှပသေသပ်အောင် တည်ဆောက်ချင်သော Photographer များ နှင့် Freelancer များ
– ကိုယ်ပိုင် Website တစ်ခုကို အချိန်တိုအတွင်း တည်ဆောက်လိုသော လုပ်ငန်းရှင်များ
– E-commerce Website တစ်ခုကို ငွေကုန်ကြေးကျ သက်သာစွာဖြင့် ဖန်တီးလိုသူများ
– Website တစ်ခုရဲ့အခြေခံဖြစ်တဲ့ Domain နှင့် Hosting အကြောင်း
– Domain နှင့် Hosting များကို ကိုယ်တိုင် Register လုပ်၍ ချိတ်ဆက် အသုံးပြုပုံ
– အခြေခံ WordPress CMS အကြောင်း နှင့် Settings များ ပြင်ဆင်ပုံ
– လက်တွေ့ E-Commerce Website တစ်ခုကို Online တွင် တိုက်ရိုက်ဖန်တီး ရေးဆွဲပုံ
– Desktop, Tablet နှင့် Mobile တွင် Responsive ဖြစ်အောင် ပြုလုပ်ပုံ
– ရိုးရိုး Login System နှင့် Social Media Login System ဖန်တီးတည်ဆောက်ပုံ
– အချက်အလတ် လုံခြုံရေးအတွက် SSL (Secure Sockets Layer) ထည့်သွင်းအသုံးပြုပုံ
– မိမိရဲ့ Website ကို Google ရဲ့ နံပါတ် (၁) Page မှာ ပေါ်လာစေရန် SEO (Search Engine Optimization) ပြုလုပ်ပုံ
– Website Loading ပိုမိုမြန်ဆန်လာအောင် ပြင်ဆင်ထိန်းသိမ်းပုံ
– Webmail ကိုအသုံးပြု၍ မိမိ Domain ဖြင့် Email ဖန်တီးပုံ
– Email Marketing အတွက် Plugin များ ချိတ်ဆက်အသုံးပြုပုံ
– မိမိရဲ့ Location တည်နေရာကို Google Maps ဖြင့် ထည့်သွင်းဖော်ပြပုံများ
– မိမိ Websiteကို ဘာသာစကားအမျိုးမျိုးဖြင့် ပြောင်းလဲသုံးဆွဲနိုင်အောင် ပြုလုပ်ပုံ
– Localhost မှ အွန်လိုင်းပေါ်သို့ လွှင့်တင်ပုံ နည်းလမ်းများအပါအဝင် Online မှာ လွှင့်တင်နိုင်တဲ့အထိ WordPress CMS ကိုအသုံးပြုပြီး သိထား၊ တတ်ထားမှဖြစ်မယ့် အကြောင်းအရာအချက်အလက်များစွာကို အချိန်တိုတိုနဲ့လိုရင်းရောက်အောင် စီစဉ်ထားပါတယ်။
Ko Kyaw Win Htay
ဆရာသင်ပြနည်းပေးလမ်းကြောင့် website ရေးဆွဲနည်းကို အလွယ်တကူလေ့လာနိုင်လို့ ကျေးဇူးပါဆရာ
As for technology you may be best. But we need more time pls and weakness of academic technology if the one who is very far from IT this is not suitable. But I really thank you for your training and I got so many ways of thinking about the web. Thank you.
Ko Bphone Myat Kyaw
မသိတာတွေကိုအချိန်ကုန်ခံ၊တစ်ကူးတစ်ကရှင်းပြပြီးအစအဆုံးသင်ပေး၊လုပ်ဆောင်ပေးသောအကိုကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာ။စိတ်ရှည်ပြီးအသေးစိတ်လိုက်ရှင်းပြပေးတဲ့အကိုကို့Respect ပါအကို။ Vector Online Learning Platform ဆက်လက်တိုးတတ်အောင်မြင်မှုအပေါင်းသရဖူဆောင်းနိုင်ပါစေခင်ဗျာ။ Ko Myat Min Lu
Ma Lin Yate Chal
စိတ်ရှည်ပြီးတစ်ဦးချင်းကိုနားလည်အောင်ရှင်းပြပေးတဲ့ စေတနာလဲကောင်းတဲ့ဆရာ ဒီထက်မကအောင်မြင်ပါစေ
Ma Khin Win Kyi
စိတ်ရှည်စွာ သင်ကြားပေးတဲ့ဆရာပါ အချိန်တိုအတွင်း နားလည်အောင်ရှင်းပြပေးပါတယ်
တကယ်ကိုစေတနာပါတဲ့ဆရာပါ videoတွေတင်ပေးထားပြီး ပြီးပြီးရောမဟုတ်ဘဲ သိချင်တာ cbမှာသွားမေးတိုင်းစိတ်ရှည်လက်ရှည်နဲ့ သင်ပြပေးပါတယ် ကျေးဇူးပါဆရာ
– အချိန်နှင့် တပြေးညီပြောင်းလဲနေသော နည်းပညာများအတွက် သင်ခန်းစာများကိုလည်း Update To Date အမြဲရရှိနေမည်ဖြစ်သည်။
– သင်ခန်းစာများ Update လုပ်ပြီးတိုင်း VWC Facebook Secret Group မှတဆင့် အသိပေးသွားမည်ဖြစ်ပါသည်။
– မိမိကွန်ပျူတာတွင် Setup လုပ်တဲ့နေရာတွေမှာ အခက်အခဲရှိပါက Virtual နည်းပညာများကို အသုံးပြုပြီး အင်တာနက်မှတဆင့် Trainer ကိုယ်တိုင် ဝင်ရောက်ပြင်ဆင်ပေး ဖြည့်စွက်ပေးပါသည်။
– သင်ခန်းစာများအားလုံး၏ 70% လေ့လာပြီးစီးပါက Certificate အတွက် Request နိုင်လုပ်ပါသည်။ တက်မြောက်ကြောင်း စစ်ဆေးအောင်မြင်ပါက Certificate ချက်ချင်းထုတ်ပေးမည်ဖြစ်သည်။
– သင်တန်းသားများအနေဖြင့် VWC Facebook Secret Group တွင် ဝင်ရောက်ဆွေးနွေးမေးမြန်းခွင့် ရရှိမည်ဖြစ်သည်။
ဝက်ဘ်ဆိုဒ်ရေးဆွဲနည်း သင်ခန်းစာမှာတော့ ခေတ်ရဲ့လိုအပ်ချက်အရ လုပ်ငန်းကဏ္ဍအသီးသီးအတွက် Website အမျိုးမျိုးကို ဖန်တီးတည်ဆောက်ပြီး ရပ်တည်ကြရတော့မယ့် အချိန်ကိုရောက်ရှိနေပါပြီ။ ဒီလိုကာလမျိုးမှာ Website အကြောင်းနဲ့ Website ရေးဆွဲနည်းတွေကို မသိမဖြစ် သိထား ရမှာဖြစ်သလို မတတ်မဖြစ်တတ်ထားမယ်ဆိုရင်လည်း ကိုယ်ပိုင် Website တစ်ခုကို အလွယ်တကူနဲ့ရေးဆွဲဖန်တီးအသုံးချနိုင် ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒါကြောင့် Website တစ်ခုအတွက် အခြေခံဖြစ်သလို အရေးအကြီးဆုံးလို့ပြောလို့ရတဲ့ Domain အကြောင်း ၊ Hosting အကြောင်းတွေကနေ စတင်ပြီး Online မှာ Website လွှင့်တင်နိုင်တဲ့အထိ WordPress CMS ကိုအသုံးပြုပြီး Website ရေးဆွဲနည်းတွေနဲ့တကွ သိထားတတ်ထားမှဖြစ်မယ့် အကြောင်းအရာအချက်အလက်ပေါင်းစုံတို့ကို အချိန်တိုတိုနဲ့လိုရင်းရောက်အောင် စီစဉ်သင်ကြားထားပါတယ်။
ခေတ်ရဲ့လိုအပ်ချက်အရ လုပ်ငန်းကဏ္ဍအသီးသီးအတွက် Website အမျိုးမျိုးကို ဖန်တီးတည်ဆောက်ပြီး ရပ်တည်ကြရတော့မယ့် အချိန်ကိုရောက်ရှိနေပါပြီ။ ဒီလိုကာလမျိုးမှာ Website အကြောင်းနဲ့ Website ရေးဆွဲနည်းတွေကို မသိမဖြစ် သိထား ရမှာဖြစ်သလို မတတ်မဖြစ်တတ်ထားမယ်ဆိုရင်လည်း ကိုယ်ပိုင် Website တစ်ခုကို အလွယ်တကူနဲ့ရေးဆွဲဖန်တီးအသုံးချနိုင် ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒါကြောင့် Website တစ်ခုအတွက် အခြေခံဖြစ်သလို အရေးအကြီးဆုံးလို့ပြောလို့ရတဲ့ Domain အကြောင်း ၊ Hosting အကြောင်းတွေကနေ စတင်ပြီး Online မှာ Website လွှင့်တင်နိုင်တဲ့အထိ WordPress CMS ကိုအသုံးပြုပြီး Website ရေးဆွဲနည်းတွေနဲ့တကွ သိထားတတ်ထားမှဖြစ်မယ့် အကြောင်းအရာအချက်အလက်ပေါင်းစုံတို့ကို အချိန်တိုတိုနဲ့လိုရင်းရောက်အောင် စီစဉ်သင်ကြားထားပါတယ်။
001 Domain and Hosting (Intro)
002 Domain Registraion
003 Hosting Registration
004 Setup host and domain
005 cPanel Dashboard and User interface
006 WordPress Install in cPanel
007 Install and Setup XAMPP (Local Host)
008 Install WordPress and Setup (Local Host)
009 About Dashboard
010 Posts (Add New)
011 Posts (Edit Post)
012 Posts (Categories)
013 Posts (Sub Categories)
014 Post (Tags)
015 About Media Library
016 Pages (Create, Set Settings and Delete)
017 Themes (Install and Uninstall)
018 Menu (Add, Remove and Create Sub Menu)
019 Plugins and Setup Contact Form
020 User Managing
021 Using WordPress Tools
022 WordPress Settings
023 Online Store Intro
024 Theme Installation for Online Store
025 Menu and Pages Setup for Online Store
026 WooCommerce Install and Setup for Online Store
Add New Product to WooCommerce for Online Shop
027 Designing Home Page for Online Store
028 Mobile Design for Online Store
029 Tablet Design for Online Store
030 Install and Setup SSL for Online Store
031 Create MailChimp account and link with WordPress for Online Store
032 Create Email Subscribe form with MailChimp widget for Online Store
033 Create Subscribe form and Share button with Sumo for Online Store
034 Add Social Share Button for Online Store
035 Make to faster site loading for Online Store
036 Google Maps for Online Store
037 Registration and Menu Setup for Online Shop
038 Social Login for Online Shop
039 SEO Basic for Online Shop
040 Add New Post (SEO Friendly)
မိမိ Website ကိုဘာသာစကား အမျိုးမျိုး ပြောင်းလဲသုံးစွဲနိုင်အောင် စီမံခြင်း
WordPress Login Pageကို စိတ်ကြိုက် ဒီဇိုင်း ပြင်ဆင်ခြင်း
WordPress တွင် မြန်မာဖောင့် အမျိုးမျိုးပြောင်းလဲသုံးစွဲခြင်း
Localhost website ကို အွန်လိုင်းပေါ်သို့ လွှင့်တင်နည်း
Zapier ကိုအသုံးပြု၍ Facebook Group တွင် Post များ Auto Share ခြင်း
WordPress ကို Digital Ocean တွင် Install နှင့် Setup လုပ်ခြင်း
Webmail ဖန်တီးပုံနှင့် Cpanel ထဲတွင်အသုံးပြုပုံ
Webmail ကို Gmail နှင့် တွဲဖက်အသုံးပြုပုံ
Propellerads ကိုအသုံးပြု၍ အပိုဝင်ငွေရရန် ကြော်ငြာများလက်ခံခြင်း
Propellerads ဖြင့် ချိတ်ဆက်ပုံ (၂)
Header Menu စိတ်တိုင်းကျ ပြင်ဆင်အသုံးပြုခြင်း
မိမိ Website တွင် Responsive Slider ထည့်သွင်းအသုံးပြုခြင်း